There's no dog but Allah and Muhammad isaprophet of doom
စစ်မှန်သောအစ္စလာမ်၏အမှန်တရားကိုဝေဖန်ထောက်ပြရန်၊ တမန်တော်မိုဟာမက်၏ အကျင့်စာရိတ္တ၊ အပြုအမူတို့ ကိုဖော်ထုတ်ရန်၊ မြန်မာပြည်တွင်သာမက ကမ္ဘာတစ်ဝှန်းကအစ္စလာမ်ပညာရှင် ဗြောင်လိမ်ဗြောင်စား၊ ကလိမ်စေ့ငြမ်းဆင်များ၏ လှည့်ဖြားမှုမှကင်းဝေးစေရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်။
Prophet Muhammad(Pedophilia Be Upon Him)
ကျွန်တော် လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်လောက်တုန်းက ဖတ်ဖူးတဲ့ ကာတွန်းလေးတစ်ကွက်ကိုသွားသတိရမိတယ်။ မြေးအဖိုး၂ယောက်ရှိတယ်ပေါ့။ မြေးလုပ်သူက သူငယ်တန်းကျောင်းသား ကျောင်းသွားတယ်။ အဖိုးကခေတ်ပညာတတ်ပုံမရပါဘူး။ မြေးလေးက အဖိုးလုပ်သူရဲ့ရှေ့မှာ စာကျက်တယ်။ ကမ္ဘာကြီးသည်လုံးပါသည်ဆိုပြီးတော့။ အဲဒီမှာအဖိုးလုပ်သူက အမှားပြင်ပေးတယ်။ "ဟဲ့မြေးရဲ့ ကမ္ဘာကြီးဆိုတာ အပြားကြီးကွဲ့"ဆိုပြီးတော့။ ကျောင်းမှာအဲဒီလိုသွားဖြေတော့ ကလေးခမျာ အမှတ်လျော့ခံရတာပေါ့။ ဒါနဲ့ နောက်နေ့လည်းရောက်ရော အိမ်မှာစာကျက်တော့ "ကမ္ဘာကြီးသည် ကျောင်းတွင်လုံး၍ အိမ်တွင်ပြားပါသည်" ဆိုပြီးဖြစ်သွားရောဗျာ။ အခုလည်း ကမ္ဘာကြီးသည် အပြင်တွင်လုံး၍ ကိုရန်ထဲတွင်ပြားပါသည် ဆိုပြီးတော့ အဲဒီကာတွန်းလေးကိုအစွဲပြုပြီး ခေါင်းစဉ်တပ်လိုက်ပါတယ်။
Quran's Flat Earth Part 167 - Amazing videos are here
Posted by Muhammad the Teddy Bear at 7:08 AM7comments:
Qur'an 2:221: Do not marry idolatresses until they believe. A believing slave woman is better thananon-believing free woman; do not get your girls married to unbelievers until they (the unbelievers) convert to Islam.
(အို-"အီမာန်" ယုံကြည်ခြင်းသဒ္ဒါတရားထားရှိကြသော "မုအ်မင်န်" အပေါင်းတို့) အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့်ယှဉ်တွဲရွေ့ အခြားအရာကိုကိုးကွယ်သောမိန်းမများသည် "အီမာန်" ယုံကြည်ခြင်း သဒ္ဒါတရားမထားရှိကြသမျှ ကာလပတ်လုံး ထိုမိန်းမများနှင့် အသင်တို့သည်ထိမ်းမြားမင်္ဂလာမပြုကြကုန်လင့်။ အမှန်သော်ကား အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့်ယှဉ်တွဲရွေ့ အခြားအရာကိုကိုးကွယ်သောမိန်းမတစ်ဦးသည် အသင်တို့အဖို့အကယ်ရွေ့ နှစ်သက်စရာဖြစ်ငြားသော်လည်း "အီမာန်" ယုံကြည်ခြင်းသဒ္ဒါတရားထားရှိသော ကျွန်မိန်းမတစ်ဦးသည် (အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့် ယှဉ်တွဲရွေ့ အခြားအရာကို ကိုးကွယ်သော) ထိုမိန်းမထက် မုချသာရွေ့ကောင်း၏။ ထိုနည်းတူစွာ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့်ယှဉ်တွဲရွေ့ အခြားအရာကိုကိုးကွယ်သောယောက်ျားသည် "အီမာန်" ယုံကြည်ခြင်းသဒ္ဒါတရားမထားရှိကြသမျှကာလပတ်လုံး ထိုသူများနှင့် (မွတ်စ်လင်မ်အမျိုးသမီးများကို) ထိမ်းမြားရွေ့ မပေးကြကုန်လင့်။ အမှန်သော်ကားအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့်ယှဉ်တွဲရွေ့ အခြားအရာကိုကိုးကွယ်သူတစ်ဦးသည် အသင်တို့အဘို့ အကယ်ရွေ့နှစ်သက်စရာဖြစ်ငြားသော်လည်း အီမာန် ယုံကြည်ခြင်းသဒ္ဒါတရားထားရှိသော ကျွန်ယောက်ျားတစ်ဦးသည် (အလ္လ်ာအရှင်မြတ်နှင့်် ယှဉ်တွဲရွေ့ အခြားအရာကို ကိုးကွယ်သော) ထိုယောက်ျားထက် မုချသာရွေ့ကောင်း၏။ (အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့် ယှဉ်တွဲ၍အခြားအရာကို ကိုးကွယ်သောသူတို့သည် အသင်တို့အား) ငရဲမီးသို့ခေါ်ဆောင်ကြကုန်၏။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မှာမူ မိမိ၏ဆန္ဒတော်ဖြင့် (အသင်တို့အား) ဂျန္နတ်အမတသုခဘုံသို့၎င်း၊ အပြစ်များမှ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးသနားတော် မူခြင်းသို့၎င်း၊ ခေါ်ဆောင်လျက်ရှိတော်မူ၏။ ထို့ပြင်တဝ ထိုအရှင်မြတ်သည် လူသားတို့ သတိတရား ရစိမ့်သောငှာ မိမိ၏ တရားဒေသနာတော်များကို ထင်ရှားစေတော်မူ၏။ (ကုရ်အာန် ၂ : ၂၂၁)
Posted by Muhammad the Teddy Bear at 3:10 PM2comments:
Posted by Muhammad the Teddy Bear at 8:08 PM 1 comment:
Labels: ကုရ်အာန်ကျမ်း, ဘိုင်ဘယ်လ်, မိုဟာမက်, ယေရှု
သို့သော် ၁၉၅၁- ဇွန်လတွင်ကျင်းပခဲ့သော အလယ်သံကျော် မူဆလင်ညီလာခံကမူ ရိုဟင်ဂျာမဟုတ်ဘဲ ဗမာ မူဆလင် ကဲ့သို့ ရခိုင်မူဆလင်လူမျိုးဟု ခေါ်ဝေါ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ရခိုင်တို့က ငါတို့ရခိုင်တွင် မူဆလင် ဘာသာဝင် မရှိဟု ပြောလာကြသောအခါ ရိုဟင်ဂျာဘက်သို့ ဖေါက်ထွက်ရန် ထွက်ပေါက်ရှာ လာကြသည်။ ၁၉၆၀-ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရိုဟင်ဂျာသတင်းစာ၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရိုဟင်ဂျာ ကျောင်းသားအသင်းထိ လှုပ်ရှားလာခဲ့ကြသည်။၁၃၊ ၅၊ ၈၈ - နေ့က မောင်တောမြို့နယ်တွင် အလွန် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော ကုလားလှုပ်ရှားမှုတခုဖြစ်ပွား ခဲ့သည်။ ကုလား ၅၀၀၀၀-ခန့်သည် မောင်တောမြို့ကို အရပ်ရှစ်မျက်နှာမှ ၀ိုင်းပြီးဟစ်အော်ကြွေးကြော် မီးရှို့သတ်ဖြတ် ရန်ချီတက်လာခဲ့ကြသည်။ လှုပ်ရှားမှုမှာ ညနေရှစ်နာရီခွဲမှ နောက် တနေ့နံနက် ၃-နာရီခွဲအထိ ကြာခဲ့သည်။ သူတို့ ဘာသာစကားဖြင့် ဘုရားသခင် အလိုကျတိုက်ပွဲဝင်ကြ၊ မင်းတို့ တိုင်းပြည်ငါတို့ တိုင်းပြည် ဖြစ်ရမည်ဟူ၍ ဟစ်အော်ကြ သည်။
Posted by Muhammad the Teddy Bear at 11:13 AM3comments:
Labels: ကုလား, မွတ်ဆလင်, ရိုဟင်ဂျာ
Posted by Muhammad the Teddy Bear at 1:03 AM No comments:
Labels: ကိုင်ရို, မွတ်ဆလင်, အစ္စလာမ်, အိုဘားမား, အီဂျစ်, အမေရိကား
Posted by Muhammad the Teddy Bear at 2:33 AM4comments:
Labels: ကုလားအုတ်သေး, မိုဟာမက်
Posted by Muhammad the Teddy Bear at 1:30 AM No comments:
Labels: မီးရှို့, ဟီဂျပ်ဘ်, အမျိုးသမီး
ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ် မြန်မာဘာသာပြန် ပထမတွဲ
ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ် မြန်မာဘာသာပြန် ဒုတိယတွဲ
ကုလားမုန်းတီးရေးလည်းမဟုတ်၊မွတ်ဆလင်ဆန့်ကျင်ရေးလည်းမဟုတ်တဲ့Anti Islam စစ်စစ်။